Chelsea Oo Isha Ku Haysa Inay Xilli Dambe U Dhaqaaqdo Xiddiga Borussia Dortmund Jude Bellingham
HomeSuuqa kala iibsigaChelsea oo isha ku haysa inay xilli dambe u dhaqaaqdo xiddiga Borussia Dortmund Jude Bellingham
August 16, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay dalab waqti danbe u dirto xidiga kooxda Borussia Dortmund xiddiga Jude Bellingham.
18 jirkaan ayaa BVB uga yimid Birmingham City xagaagii 2020 wuxuuna waqti yar ku qaatay inuu la qabsado nolosha Jarmalka, isagoo dhaliyay afar gool isla markaana caawiyey shan kale 46 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore.
Bellingham ayaa iska diiday xiisihii Manchester United si ay u dhammeystirto u dhaqaaqista Westfalenstadion, laakiin Chelsea ayaa loo saadaalinayaa inay u dhaqaaqdo da ‘yarka inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee hadda.
Sida laga soo xigtay Eurosport , milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa doonaya inuu heshiis la galo Bellingham haddii ay kooxdu ku fashilanto dalabkeedii ahaa inay Declan Rice ka soo kaxayso West Ham United.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiska Bellingham ee Dortmund ma dhacayo ilaa xagaaga 2025, waxaana loo malaynayaa inuusan ku dagdagi doonin inuu ka tago kooxda Marco Rose .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa seddex kulan beddel ku soo galay England Euro 2020 waxaana la filayaa inuu ku soo bilowdo marka Dortmund ay wajahdo Bayern Munich Talaadada DFL-Supercup.